Maraykanka oo 30 000 oo askeri u diraaya dalka Afqaanistaan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maraykanka oo 30 000 oo askeri u diraaya dalka Afqaanistaan
Maraykanka oo 30 000 oo askeri u diraaya dalka Afqaanistaan
December 2, 2009 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa cadeeyay in ay u dirayaan dalka Afqaanistaan 30 000 oo askeri.
Barack Obama oo ka jeediyey khudbad muddo dheer la sugaayey xarun ciidnka maraykankau iska leeyahay oo la yiraahdo West Point ayaa sheegay in ciidanka cusub ay ku sugnaan doona dalka Afaanistaan muddo lixbilood ah.
Dhaqaalaha ku baxaya ciidanka ku sugan Afqaanistaan ayaa gaaraya 30 bilyan oo dollar, marka kor loo qaado tirada ciidanka Maraykanka ee ku sugan Afqaanistaan ayey gaarayaan 100 000 oo askeri.Â Dalka Maraykanka ayaa doonaya in ay dagaalka ku guuleystaan iyaga oo aan wax khasaaro ah soo gaarin
Obama ayaa sidoo kale ka codsadey wadamada ku jira Nato iyo kuwa ay xulafada yihiin in ay soo kordhiyaan ciidanka ka jooga Afqaanistaan, waxaana uu doonayaa in wadamada Yurub ay ku soo kordhiyaan 5000 â€“ 10 000 oo askeri.
Maraykanka ayaa qorsheynaya in ay ka baxaan dalka Afaanistaa sanadka 2011.
Obama ayaa markii u horeysey ka dhawaajiyey waqtiga ciidanka Maraykanku ay ka baxayaan dalka Afqanistaan, waxaana uu sheegay in ay dib ugala soo baxayaan ciidankooda laga bilaabo bisha July ee sanadka 2011.
Khudbadda madaxweyne Obama ayaa waxaa soo dhaweeyay wadamo badan oo ay xulafo yihiin. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada soo dhaweeyay waxaan uu sheegay in ay ka fiisrasanayaan in ay ciidan kale halkaas u diraan.
Dalka Japan ayaa ku yaboohay lacag 5 bilyan dollar ah oo ay ku kaalmeynayaan dib u dhiska Afaanistaan, waxayna sheegeen in ay la shaqeynayaan ciidanka Maraykanka ee ku sugan Afqaanistaan.
Raysalwasaaraha dalka Biritan Gordon Brown Â ayaa sheegay in ay u dirayaan Afqaanistaan 500 oo askeri oo hor leh.
Dagaalka ka socda dalka Afqaanistaan ayaa maraya sanadkii sideedaad mana jirto wax horumar ah oo la taaban karo oo ay gaareen wadamada reer galbeedku, madaxda Alqaacida iyo Talibaankuna sidoodi ayey u shaqeysanayaan.